isando imoto likaxakeka
emnyango sensor alarm
LED isibane itotshi
Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd yasekwa ngo-2009 yaye mveliso wayo e Shenzhen. With10 iminyaka yophuhliso, ukususela OEM ukuya ODM, sinikela ingqalelo ngakumbi nangakumbi kuphuhliso iimveliso ezintsha, ezenzelwe imifuziselo ezahlukeneyo ezithandwayo kunye iimpawu Ariza bayime amalungelo abenzi, yonke le mifuziselo ivunywa kakhulu ngabantu abasebenzisa inkonzo zethu kwilizwe lonke.
Okubalulekileyo, siye ebhalisiweyo ARIZA yethu brand yabo, Bell tama e USA, Japan kunye China ngempumelelo.
O ur elizimisele ukunceda wonke umntu aphile ubomi ekhuselekileyo. Sibonelela kakhulu-in-class ukhuseleko lobuqu, ukhuseleko ekhaya, kunye neemveliso zokunyanzelisa umthetho ukuba nkulu ukhuseleko kwakho. Sizama ukufundisa nokuxhobisa abathengi bethu - ukuze, xa sijamelene nengozi, wena nabo ubathandayo baxhotyiswa kuphela iimveliso enamandla, kodwa ulwazi ngokunjalo. Sikholelwa wonke umntu kufuneka zikhuselwe ukuze bakwazi ukuphila ekhuselekileyo, ubomi obusempilweni kunye noxolo lwengqondo.
A riza uzibophelele ukugcina kwizinga eliphezulu iimveliso kunye nokunika inkonzo epheleleyo kunye nesisombululo, ukuba nibe nako ukuhlangabezana neemfuno umthengi zisoloko. Lokubonelela ngenkonzo lula ngakumbi, Ariza isungule iindidi ezintsha B2B kunye nokuthengiswa B2C indlela. Ngenxa ezintsha rhoqo ukusukela imfezeko, Ariza iye ngumnikazi iNkqubo yoLawulo professional Umgangatho ukususela lusekiwe. Siye got ngempumelelo izatifikethi ISO9001 CE RoHS FCC SGS.
Lwedilesi: I-5 Umgangatho wokwakha A1, Xinfu icandelo park, Chongqing indlela, kwilali heping, idolophu fuyong, kwisithili Bao'an, Shenzhen, China 518103